क्यान्सरको पहिलो स्टेजमा देखिन्छन् यो लक्षण, कहिले नगर्नुहोस् वेवास्ता??? – News Nepali Dainik
क्यान्सरको पहिलो स्टेजमा देखिन्छन् यो लक्षण, कहिले नगर्नुहोस् वेवास्ता???
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ०५, २०७७ समय: ८:३४:३९
###क्यान्सर भन्नसाथ हामी ठान्छौ, उपचार नहुने रोग । वा प्राणघातक । तर, यो त्यसबेला मात्र घातक हुन्छ, जब यसको लक्षणलाई बेवास्ता गरिन्छ । र, त्यसले जटिल अवस्थामा प्रवेश गर्छ।
क्यान्सरको उपचार संभव छ। यदि सुरुवाती चरणमै त्यसको लक्षण फेला पर्‍यो भने उपचार गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ त्यस्ता थुप्रै उदाहरण पनि छ, जसले क्यान्सरको सफलतापूर्वक उपचार गराए ।
यसका लक्षणहरु थाहा पाएपछि तुरुन्तै उपचार गराउनुपर्छ, क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ । अत यहाँ क्यान्सरका लक्षणबारे जानकारी गराइएको छ ।
यसका धेरै लक्षण हुन्छन् । जस्तै स्तनमा गाँठो, निप्पलको रंगमा परिवर्तन, निप्पल चिलाउने, रेशा, निप्पलभित्र मोडिनु । तर, यो कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ कि यिनीहरु स्तन क्यान्सरका पक्का प्रमाण होइनन् ।
कहिलेकाहीँ हार्मोनको परिवर्तनले वा स्वास्थ्यसम्वन्धि अन्य कारणले पनि यस्तो हुन सक्छ । त्यसैले डाक्टरको परामर्श लिनु राम्रो हुन्छ ।
(मूत्र वा मलबाट रगत निस्किनु)
पिसाब वा दिसा गर्दा रगत निस्कियो भने तुरुन्त अस्पताल गएर चेकअप गराइहाल्नुपर्छ । किनकी यो किड्नी वा पिसाबको थैलीमा क्यान्सरको संकेत पनि हुन सक्छ ।
यसका अलावा पाचन वा शौच सम्वन्धी बानीमा स्थायी परिवर्तन आउनु । जस्तै लामो समयसम्म कब्जियत, डायरिया वा अधिक दिसा हुनु कोलोन क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ ।
(अचानक तौल घट्नु)
(मुखमा कत्ला आउनु)
दुखाईका कैयन कारण हुन सक्छन् । तर बिना कुनै कारण एक महिना वा सोभन्दा बढि समयसम्म दुखाई जारी रह्यो भने यो हड्डी, ब्रेन वा अन्य क्यान्सरको संकेत हुन सक्छ ।
यसैगरी लगातारको टाउको दुखाइ ब्रेन ट्युमरको लक्षण हुन्छ । जबकि कोलोन, रेक्टम वा ओवरीमा क्यान्सरका कारण पिठ्यूमा दुखाई हुन्छ । लंग क्यान्सरबाट पिडित केही रोगीमा छातिमा दुखाई हुन्छ । यो सबै क्यान्सर फैलिँदाको पीडा हो ।
दिनभरको भागदौड र तनावबाट थकान महसुस हुनु सामान्य कुरा हो । तर, बिना कुनै मिहनेत र सही खानपिनका बाबजुद पनि थकाईको महसुस हुन्छ भने ब्लड क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ। यसका अलावा कोलोन वा पेटको क्यान्सर भएमा पनि रगतको कमि हुन्छ र अत्यधिक थकानको महसुस हुन्छ ।
मासिक धर्मका अलावा अचानक ब्लिडिङ हुनु कार्विनल क्यान्सरको संकेत हुन सक्छ । यसका अलावा रेक्टम अर्थात् मलद्वारबाट रक्तश्राव (जो कालो दिशाका रुपमा देखिन्छ) कोलोन क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ ।
Last Updated on: January 18th, 2021 at 8:34 am
१३९२ पटक हेरिएको